WAR DEG DEG AH:Garoowe oo gashay xaalad deg deg ah & Ciidamadii ugu badnaa oo qabsaday duleedka magaalada + Cabsi xoogan oo….. | Puntland News
WAR DEG DEG AH:Garoowe oo gashay xaalad deg deg ah & Ciidamadii ugu badnaa oo qabsaday duleedka magaalada + Cabsi xoogan oo…..
Wararka Warsidaha Puntlandnews.net uu haatan ka helayo magaalada Garoowe ee caasimada Puntland ayaa sheegaya in ciidamadii ugu badnaa ee malayshiyaad Beeleedyo ah ay dageen duleedka magaaalada Garoowe.
Malayshiyaad Beeleedyadani degay duleedka Garoowe ayaa ka yimid gobolka Mudug si ay uga qayb qaataan hawlgalka xoreynta gobolka Sool inkastoo markii ay iskaga baxeen jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq kadib markii ay isku af dhaafeen saraakiisha ciidamada Puntland xiliga la qaadi doono dagaalka ugu adag ee ka dhanka ah ciidamada Somaliland iyo qaabka loo xoreynayo gobolka Sool oo ay ka war wareegayso ka qabashadeeda arintaasi xukuumadda C/weli Gaas.
Ciidamadani oo lagu sheegay in ay gaadhayaan gaadiidka dagaal ee ay wataan ilaa 17 gaadhi oo nooca dagaalka ah ayaa iskaga baxay jiidaha deegaanka Tukaraq maalintii shalay ahayd, iyagoona degay deegaanka Bixin oo dhaca duleedka magaalada Garoowe halkaas oo waxyeelooyin isugu jira dhac iyo boob ay ugu gaysteen gacanstada ka ganacsata Qaadka.
Amaanka magaalada Garoowe ayaa la sheegay in uu khal khal xoogan ku imaan karo hadii ay sii daganaadaan ciidamadani taas oo sababi karta isku dhacyo dhex mara ciidamadan iyo dadka deegaanka oo cabasho xoogan ka muujinaya malayshiyaad Beeleedyadani.
Xukuumadda madaxweyne Gaas ayaan weli ka hadlin arintani mana jirto dadaalo ku aadan soo xareynta ciidamadani oo ay samaysay iyo sidoo kale in ay iclaamiso dagaal dhab ah oo laga qaado ciidamada Somaliland, waana sababta ka dambaysa in ciidamo ka tirsan Puntland iyo malayshiyaad Beeleedyadaba qaarkood ay iskaga baxaan jiidaha hore.
Wixii kusoo kordha warka ciidamadaasi kala soco Puntlandnews.net